भागरथीको बलात्कार र हत्यापछिको तरंग, नेपालमा बलात्कारको डर लाग्दो तथ्यांक – Avenues Khabar
८ फाल्गुन २०७७, शनिबार १३:१४ मा प्रकाशित
बैतडीको दोगडाकेदार गाउँपालिका–७ चडेपानीको गरिब परिवारमा जन्मिएकी १७ वर्षीय भागरथी भट्ट अन्य दिन जसरि घरको सबै काम सकेर आमा र भाउजुलाई गए है भन्दै आफु पढ्ने सनातम धर्म माध्यामिक विद्यालय तर्फ लागेकी थिइन् । दिनभरी सबै सामन्य थियो । बेलुकाको बासी रोटी खाएर गएकी भागरथी कलेज सकेर आउँछु अनि खाना खान्छु भनेकी थिइन् ।
भागरथी अत्यन्तै लगनशील अनि अध्यनमा पनि उत्तिकै तगडा थिइन् , गाउँमा सबै संग हास्ने खेल्ने भएकाले गाउँले नै उनलाई निक्कै माया गर्थ्यो । उनको चरित्र पवित्र थियो । दाइ भारतमा थिए भने उनको बुबा बितेको पनि जम्मा डेढ महिना मात्र भएको थियो ।
हो एकातिर गरिब परिवार अनि त्यसमाथि उनीहरुको जीवन धान्ने खम्बा अर्थात बुबा बितेको कहाली लाग्दो पीडामा थियो भागरथीको परिवार । सधैं झैँ ३ बजेको आसपासमा घर फर्कने छोरी बेलुका अबेर सम्म पनी घर नर्फर्कीदा बिचरी एक्ली आमाको मन कस्तो भयो होला । उनले छोरीलाई धेरै पटक फोन गर्छिन् तर भागरथीको फोन स्वीच अफ भइसकेको हुन्छ । कलेज गएकी भागरथी राति अबेर सम्म नफर्केपछि घरमा रुवाबासी शुरु भयो र गाउँलेहरु भागरथीलाई खोज्न निस्किए । त्यो रात कहिँ कतैबाट भागरथीको कुनै खबर आएन ।
भोलि पल्ट स्थानीय भागरथीका आफन्त र प्रहरीको टोली उनको खोजीमा निस्कियो । घटना भएको भोलिपल्ट अर्थात गत माघ २२ गते घर देखि केही किलोमिटरको दुरीमा पर्ने जंगलमा भागरथीको मृत शरीर फेला पर्छ । कल्पना गर्नुहोस त दर्शकबृन्द आफ्नो प्यारो श्रीमान मरेर सेतो सारीमा बरखी बारिरहेकी त्यो आमालाइ कस्तो भयो होला लाउँलाउँ र खाउँ खाउँकि फुल जस्ती प्यारी छोरीको बलात्कार भएको र त्यसपछि हत्या भयो भन्ने खबर सुन्दा ।
गाउँमा सधै सबैलाई सहयोग गर्दै हास्दै अनि सन्चै हुनुहुन्छ भन्दै पुतली जस्तै गरि हिड्ने गाउँकै प्यारी भागरथीको बलात्कार र हत्या खबरले पुरै गाउँ नै स्तब्द बन्यो । सबै गाउँलेहरु घटना स्थलतर्फ लागे । गाउँकी प्यारी छोरी कपडा खोलेको र योनाङ्गमा रगत लत्पतिएको र मृत अवस्थामा जंगलमा भेटिँदा सबै रुँदै कराउँदै थिए ।
कालगतिले मृत्यु भएको भए त एक दुइ दिन रोएर पीडालाई आँशुले पखाली दिन्थे र नियमित काममा फर्किन्थे सबै । तर भागरथीको त बलात्कार पछि अत्यन्तै क्रुर हत्या गरिएको छ । अस्पतालको शव गृहमा भागरथीको मृत शरीर छ भने एता उनको परिवार र गाउँमा आँशुको भेल रोकिएको छैन ।
भागरथीको बलात्कार र त्यस पछि क्रुर हत्या भएको खबर देशभर फैलियो । एक दिन दुई दिन गर्दै दिनहरु बित्दै गए तर त्यो क्रुर अपराधि पत्तालाग्ने कुनै छाँट देखिएन । देशभरीवाट हत्याराको खोजि र कारवाहीको लागि आवाज बुलन्द हुन थाल्यो । बैतडीको सदरमुकाममा हरेक दिन स्कुलकै पोशाकमा टाउकोमा कालो कफन बाँधेर विधार्थी र सर्वसाधारण आन्दोलनमा निस्किन थाले ।
हो प्रहरीलाई यो आन्दोलन थेग्न निक्कै गाह्रो भयो । र सुदुर पश्चिमका प्रहरी प्रमुख डि आइ जी उत्तम सुबेदी बैतडीनै बसेर अनुसन्धान गर्न थाले । अन्तत भागरथीको बलात्कार र क्रुर हत्या भएको १३ दिन पछि बलात्कारी र हत्यारा दिनेश भट्ट पक्राउ पर्यो । सुरुमा हत्यामा मात्र संग्लग्न भएको बयान दिएपनि बिहिबार उसले भागरथीको बलात्कार र क्रुर हत्या गरेको स्वीकार गरेको छ अभियुक्त दिनेश भट्टले । र घटनाको १७ दिन पछि भागरथीको शरीर आफन्तले बुझेका छन् र शुक्रबार उनको दहासंस्कार गरिएको छ ।
जिन्दगीको अन्तिम पूर्णबिराम
उनले आफ्नो फेसबुक आइडी भूमिका भट्ट भनेर नाम राखेकी रहिछन् । उनले आफ्नो फेसबुक बायोमा लेखेकी छन्, ‘फ्स्ट लभ मम ड्याड ।’ अनि त्यसको तल लेखेकी छिन्, ‘मन हो एक पटक मरेपछि सकियो । विरुवा होइन जुन बारम्बार पलाइरहने ।’ हो यही भनेर वाक्यलाई पूर्णबिराम लगाएकी थिइन् त्यही पूर्णविराम जिन्दगीको अन्तिम पूर्णबिराम भयो भागरथीको । २०७७ माघ २१ गते बैतडी जिल्लाको दोगडाकेदार गाउँपालिका–७ मा पढेर घर फर्कँदै गर्दा १७ वर्षीया भागरथी भट्टको बलात्कारपछि हत्या भयो ।
सनातन धर्म माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा ११ मा पढ्ने दिनेश भट्टले सोही स्कुलको कक्षा १२ मा पढ्ने भागरथी भट्टलाई बलत्कार पछि हत्या गरेको प्रहरी समक्ष अभियुक्त दिनेश भट्टले स्वीकारेको छ ।
हत्या अपराध स्वीकारेका दिनेश भट्टले भागरथीको हत्या गर्ने पूर्व योजना रहेको र माघ २१ गते विद्यालयबाट अन्तिम कक्षा छोडेर घर फर्किएको, सिल्ल भन्ने स्थानबाट भागरथी भन्दा अगाडि गएर सडकमा कुरेर बसेको, आफू रहेको स्थानमा भागरथी पुग्ने बित्तिकै सडकबाट तल धकेल्दै दुवै हातले घाँटी थिचेर हत्या गरेको स्विकार गरेको थियो । पुरानो घरायसी रिसिइबीका कारण आफूले भागरथीको हत्या गरेको तर आफूले भागरथिलाई बलात्कार नगरेको प्रहरी समक्ष बयान दिएको दिनेशले सुरुमा । बिहीबार भने उसले बलत्कार गरेपछि हत्या गरेको स्वीकार गरेको छ ।
भागरथी भट्टको सबै ईतिबृतान्त जानेका बुझेका दिनेश भट्टले योजना अनुसार नै भागरथीलाई बाटोबाट धकेलेर ३० मिटर तल खसालेको र घाइते अवस्थामा छटपटाएकी भागरथीलाई बलत्कार गरेपछि पोल खुल्ने डरले घाँटी थिचेर उनको हत्या गरेको बिहीबार बयान दिएका थिए । तर उता मृतक भागरथीको यौनांअगबाट रगत बगेको अवस्थामा शव भेटिएको थियो । त्यति मात्र होइन, पोस्टमार्टमको रिपोर्टले पनि भागरथीको बलात्कार पछि हत्या भएको पुष्टि भएको थियो । मृतकको स्तनमा समेत टोकिएका घाउहरू भेटिएका थिए भने यौनाङ्ग क्षतबिक्षत अवस्थामा थियो ।
त्यसैले बलात्कार गरेको होइन भन्ने आरोपितको बयान र अस्पतालले दिएका प्रमाण रिपोर्ट मिल्दाजुल्दा थिएनन् र यो विषयमा थप अनुषनधानमा लागेको प्रहरीले अन्तत सफलता हात पार्‍यो । सुरुमा स्थानीयहरुले भागरथीको हत्यामा अरु पनि संलग्न हुन सक्ने र आरोपित दिनेश भट्टले मात्र यति ठूलो घटना घटाउन नसक्ने भन्दै भागरथीको हत्याका सम्पूर्ण अपराधिहरु पक्ता नलागे सम्म मृतकको लास नउठाउने भन्दै आन्दोलित भएका थिए । पाप धुरीबाट कराउछ भने झै अन्तत दिनेश भट्टले बिहिबार भागरथी भट्टको बलात्कारपछि हत्या गरेको स्वीकार गर्यो । प्रहरीको हिरासतमा रहेका दिनेश भट्टले बैतडीका अनुसन्धान अधिकृत सामू आफूले बलात्कारपछि घाँटी थिचेर हत्या गरेको बयान दिए ।
तर फागुन ६ गते बिहीबार अनुसन्धान अधिकृत र प्रहरी हिरासतमा आफूलाई भेट्न आएका परिवारका सदस्यसँग दिनेश भट्टले भागरथी भट्टको बलात्कारपछि हत्या गरेको स्वीकार गर्यो । भागरथीको बलात्कार र हत्या गर्ने मुख्य अभियुक्त दिनेश भट्ट हो भन्ने रहस्य खुल्यो त्यस पछि शुक्रबार बिहान भागरथीका परिवार, आफन्त र गाउँलेले उनको शव बुझेका छन् । भागरथीको स्थानीय गोठलापानीबाट शवयात्रा शुरु गरी सेरा स्थित महाकाली घाटमा अन्तिम अन्त्येष्टि गरिएको छ । उनको अन्तिम संस्कारमा सैयौ मानिसहरु उपस्थित भएका थिए ।
भागरथीको शव यात्रामा उपस्थित सबै बिक्षिप्त देखिन्थे । भागरथीलाइ श्रदान्जली दिंदै सबैले कामना गरेका थिए कि अब देशका कुनैपनि छोरीहरुले भागरथीले र उनको परिवारले भोगेको पीडा खेप्न नपरोस् ।
भागरथीको बलात्कार र त्यसपछि भएको उनको हत्या यो त केवल एउटा उदाहरण मात्र हो । यहाँ हरेक दिन हाम्रा छोरीहरुले भागरथीको नियति भोग्नु परेको छ ।
नेपालमा बलात्कार र महिला हिंसाका घटना बढ्दो क्रममा छ । चाहे घरेलु हिंशा होस् वा जबर्जस्ती, महिलामाथि हुने अत्याचार, ज्यादति र दमन पटक्कै रोकिएको छैन । बलात्कार श्रृंखलाहरु मध्ये अर्को एउटा दर्दनाक बलात्कार र हत्याकाण्ड मध्यको एक हो निर्मला पन्त बलात्कार र हत्याकाण्ड । कञ्चनपुर जिल्लाको भीमदत्त नगरपालिकाकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको वि.सं. २०७५ साउन १० गते कञ्चनपुर जिल्लाकै महेन्द्रनगरमा बलात्कार गरेर हत्या गरि उखुबारीमा फ्याकिएको अबस्थामा शव फेला परेको थियो । घटना भएको झण्डै साढे २ बर्ष बितिसक्दा समेत निर्मला पन्तको हत्यारा हाल सम्म पक्ता लाग्न सकेको छैन । निर्मला पन्त बलात्कार र हत्या प्रकरण संगै नेपालमा उस्तै प्रकृतिका डरलाग्दा बलात्कारका घटनाको क्रम दिनहु बढ्दो अवस्थामा छ ।
तर कैयन घटनामा अनुषन्धानकर्ताको लापरवाहीले गर्दा दोषी उम्किने र पीडित पक्षले न्याय नपाएका थुप्रो उदाहरणहरु छन् । तर बैतडी जिल्लाको दोगडाकेदार गाउँपालिका–७ चडेपानीकी १७ वर्षीया भागरथी भट्टको बलात्कारपछि हत्या भयो र नेपाल प्रहरीले चाडैं नै दोषी पत्ता लगाउन सफल पनि भयो तर यस्तै प्रकृतिको निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्यामा संलग्न लाई सरकारले किन पत्ता लगाउन सकेको छैन ? हामि येत्ति भन्छौ घटना भएर दोषी पत्तालगाई स्याबासी खानु भन्दा एस्ता घटना नै नहुने खालको कडा कारवाही र दण्ड जरिवाना तोकिनु पर्छ । हैन भने कहिले सम्म हाम्रा छोरीहरुको चित्कार सुनिरहनु पर्ने ।
नेपालमा बलत्कारको डर लाग्दो तथ्यांक
नेपालमा हुने बलत्कारका घटना हेर्ने हो भने निक्कै डरलाग्दो तथ्यांक छ । प्रहरीको पछिल्लो तथ्याङक हेर्नेहो भने हरेक घर बाट निस्कीएका तपाइँ हाम्रा छोरीहरु मध्य प्रत्यक दिन ६ देखी ७ जना छोरीहरु बलात्कृत हुने गरेका रहेछन । कतिपय छोरीहरु त बलात्कृत मात्रै होइन बलात्कृत भएकै कारणले ज्यान समेत गुमाउनु परेको काहाली लाग्दो अवस्था छ हाम्रो । पछिल्लो ६ वर्ष आर्थिक वर्ष २०७०/७१ देखि २०७६/७७ सम्म बलत्कारका घटनाको तथ्याङक हेर्दा हाम्रो देशमा बलात्कारको घटना दोब्बर भएको देखिन्छ । त्यस्तै चालु आर्थीक वर्षको पुष मसान्त सम्म मात्रै १ हजार दुई सय ६० वटा बलत्कारका घटना भएका छन । नेपालमा वार्षीक कती बलत्कारका हुन्छन भनेर त्यसको तथ्यांक हेर्ने हो भने अत्यन्तै डर लाग्दो छ ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७०/२०७१ मा ९०५ वटा बलत्कारका घटना भएको थियो ।त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा ९ सय ८१ जना बलात्कृत भएका थिए । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा १ हजार ९३, बलात्कारका घटना भएका थिए । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा १ हजार १ सय ३७ छोरी बलात्कारको शिकार भए । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा १ हजार ४ सय ८० बलात्कारको घटना भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा २ हजार २ सय ३३ बलत्कारका घटना भएका थिए ।
त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा दुई हजार १ सय ४४ बलत्कारका घटना भएका थिए । आर्थिक वर्ष २०७०/७१ तुलनामा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा बलत्कारका घटना दोब्बर गतिमा वृद्धि भएको छ । त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षको पुष मसान्त सम्म मात्रै हेर्ने हो भने १ हजार दुई सय ६० वटा बलत्कारका घटना भैसकेका छन् । हो यो तथ्यांक हेर्दा लाग्छ कि महीला हिंसा कम गर्नको लागी सरकार र एनजिओ अनि आइ इन जिओले जतीसुकै जनचेतनामुलक कार्यक्रम गरेर अर्बौ रुपैँया खर्च गरे पनी राज्यको ढुकुटी मात्रै घट्यो तर बलत्कारका घटना भए हरेक वर्ष झन् झन् बढ्दै छन् । तथ्यांक हेर्दा डर लाग्दो अवस्था छ । के बलत्कारका घटना रोक्न हाम्रो देशको कानुन फितलो भएकै हो त ? यो प्रश्न अत्यन्तै गम्भीर छ ।
नेपालका ७७ वटा जिल्लामध्ये सबैभन्दा बढी बलात्कारका घटना देशकै राजधानी काठमाडौंमै भएको तथ्यांक छ नेपाल प्रहरी संग । काठमाडौंमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा मात्रै २ सय १० वटा बलात्कारका घटना भएका छन । प्रदेशअनुसार हेर्ने हो भने प्रदेश १ मा सबै भन्दा बढी बलात्कारका घटना भएको देखिन्छ । प्रदेश १ मा २०७५/७६ मा ५ सय ९४ वटा बलत्कारका घटना भए थिय । त्यस्तै लुम्बीनी प्रदेश मा ४ सय १ जना हाम्रा छोरीहरु बलात्कृत भएका थिय । प्रदेश २ मा २ सय ८० बलात्कारका घटना भएका थिय भने बागमती प्रदेशामा २ सय २५ छोरीहरु बलात्कारको शिकार भए , गण्डकी प्रदेशमा १ सय ६७ बलात्कारको घटना भएका थिय भने कर्णली प्रदेशमा १ सय ३५ र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा १ सय ६० वटा बलात्कार घटना भएको थियो । मान्छेले बलत्कार गर्छु भनेर गरेको हुँदैन । तर मान्छेको दिमागमा कती बेला पापको पारो चड्छ अनी उसले आफ्नो दानबी रुप देखाउँछ र बलत्कार गर्ने अनि हत्या गर्ने सम्मको जघन्य अपराध गरेको देखिन्छ ।
नेपालमा २६ देखि ३५ वर्ष उमेर समूहका महिलाहरु धेरै बलात्कारको शिकार हुँदै आएको देखिन्छ । २०७५/७६ का कुल घटनामध्ये यो उमेर समूहका ७ सय ३४ महिला पीडित भएका थिए । त्यसपछि ३६ देखि ४५ वर्ष उमेर समूहका ४ सय १० जना बलात्कृत भएको देखिन्छ । १७ देखि १८ वर्ष उमेर समूहका ३ सय २८ जना अनि , १० वर्षमुनिका १ सय ६ बालिका बलात्कृत भएको देखिन्छ । त्यस्तै ११ देखि १६ वर्षका ९२ छोरीहरु बलात्कृत भएको नेपाल प्रहरीको तथ्यांकले देखाउँछ । सातै प्रदेशको अभिलेखअनुसार अपहरणपछि ४१ जना बलात्कृत भएका थिए । १० जनाको बलात्कार गरी हत्या नै भएको थियो भने दुई जनाको बलात्कारपछि हत्या प्रयास भएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा दुई हजार २ सय ३० बलात्कारका घटनामा दुई हजार दुई सय २७ जना पक्राउ परेका थिए ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा दुई हजार १ सय ४४ मुद्दा दर्ता भएका थिय । त्यसमा दुई हजार चार सय ५० जना यौन पिपाशु पक्राउ परेका थिए ।
चालू आर्थिक वर्षको पुससम्म प्रहरीमा १ हजार दुई सय ६० वटा बलात्कारको मुद्दा दायर भएका छन । प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्यांक हेर्ने हो भने गत आव २०७६÷७७ मा २ हजार १ सय ४४ वटा बलात्कारका मुद्दा दर्ता भएका थिए । यो वर्ष सुरु भएयता देशभर साउनमा मात्र २ सय ६० वटा बलात्कारका मुद्दा दर्ता भएका छन् । पछिल्लो तथ्यांकलाई हेर्दा साउनमा सबैभन्दा बढी बलात्कारका घटना भएको छ । बलात्कृत हुनेहरुमा प्रहरी तथ्यांकअनुसार आफन्त, बिरामी, अपांगता भएका, दुधे शिशु, गर्भवतीदेखि वृद्ध उमेरसम्मका महिला बलात्कारको सिकार हुने गरेका छन् । प्रहरीले तयार पारेको ग्राफिक्समा सुन्दै अचम्म लाग्ने बलात्कारका घटना समावेश छन । यतीसम्मकी ६ महिनाका शिशु देखी ७५ वर्षका वृद्धसमेत बलत्कारको सिकार भएको घिनलाग्दो अपराध प्रहरी तथ्यांकले देखाउँछ ।
२५ जेष्ठ २०७८, मंगलवार ११:२७
विएसपी नेपाल नामक गैरसरकारी संस्थाले…
संविधान दिवस: पूर्वप्रधानमन्त्री स्वर्गिय भट्टराईलाई नेपाल रत्न प्रदान
३ आश्विन २०७८, आईतवार १२:३४
सरकारले संविधान दिवसका अवसरमा विभिन्न…
५ चैत्र २०७६, बुधबार ०८:५६
एजेन्सी : विश्वमा महामारीको रुप लिइरहेको…
३ कार्तिक २०७७, सोमबार ११:३४
काठमाडौं : आईपीएल क्रिकेटमा सट्टेबाजी…
प्रधानमन्त्री देउवाको अमेरिका भ्रमणलाई शंकाले नहेर्न परराष्ट्र मन्त्री खड्काको आग्रह
३१ जेष्ठ २०७९, मंगलवार १६:५३
काठमाडौ । परराष्ट्रमन्त्री डा.नारायण…
लिपुलेक नजिकै नेपालले सुरक्षा पोस्ट राख्ने, आज हेलिकप्टरमार्फत सुरक्षाकर्मी जाँदै
३१ बैशाख २०७७, बुधबार ०९:०९
काठमाडौं : भारतले नेपाली भूमि मिचेर बाटो…
निर्वाचित उम्मेदवारहरुको विवरण (स्थानीय निर्वाचन २०७९)
स्थानीय निर्वाचनमा विभिन्न पालिकामा निर्वाचित उम्मेदवारहरुको विस्तृत विवरण https://www.youtube.com/watch?v=rTlcplJpmuE&t=3s
यतिसम्म हानिकारक छ हर्लिक्स, विशाल ग्रुपको कालो धन्दाको खुलासा
काठमाडौं : तपाईं हामीले शरीरको तन्दुरुस्तिको लागि र शारीरिक क्षमता वृद्धि गर्न भन्दै महँगो शुल्कमा…